Hari Neupane 113 days ago
Visitor from US is reading गाडीमा आएर २५ रुपियाको मकै किन्ने औकात नभएका बुद्धिजीबीहरु
Visitor from US is reading ANA 2005 Dallas DJ Night
Visitor from US is reading Airplane Tickets to Nepal from US
Visitor from US is reading basement room on rent in south riding virginia
Visitor from US is reading US Open 07 Final Link
Visitor from US is reading NEW YEAR PARTY IN NORTH CAROLINA
[VIEWED 12673 TIMES]
Posted on 05-21-19 6:52 AM Reply [Subscribe]
Posted on 05-21-19 11:18 AM [Snapshot: 272] Reply [Subscribe]
मान्छेलाइ मान्छे गन्दैनन् - हुनेपुग्नेले नहुनेलाइ | चलिअाएको चलन हो नेपालमा । अझ भर्खर भर्खर पैसा देखेका नवधनाढ्यहरुको त कुरा नगर्नुस .....
Please log in to subscribe to Hari Neupane's postings.
Posted on 05-25-19 9:25 PM [Snapshot: 5765] Reply [Subscribe]
शीर्षक जो छनोट अलि कम्जोर देखियो। बुद्धिजीवी को ठाउँ मा करोड्पती/ ढ्नाढ्य राक्दा हुन्थ्यो कि? लेख मर्मइस्पर्षि लाग्यो।